musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Russia Inotangazve Ndege kuenda kuFrance neCzech Republic
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Czechia Breaking News • France Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Sarudzo yekumisidzana nendege nenyika idzi inoita kunge yetsika, sezvo pasina ndege yazivisa hurongwa hwekumisazve nendege dzakarongwa pakati peRussia Federation, France neCzech Republic.
Russia service yemhepo kubva kuMoscow neSt. Petersburg kuenda kuParis neNice.
Russia inotangazve Moscow kuPrague ndege.
Parizvino, Russia yakatanga zvakare basa remhepo nenyika makumi mana nesere.
Russia yakazivisa zvepamutemo kutangazve kwendege neFrance neCzech Republic kutanga neMugovera, Chikunguru 24.
Ndege dzeFrance neRussia, senge Air France, Aeroflot uye vamwe, vachakwanisa kumhanya nendege ina pasvondo pakati peMoscow neParis neMoscow neNice. Pachave nendege mbiri pasvondo pakati peSt .Petersburg nemaguta eFrance aya.
Vatakuri veCzech neRussia, senge Czech Airlines uye Aeroflot ichave zvakare inokwanisa kutangazve kushanda kwendege pakati peMoscow, Russia nePrague, Czech Republic.
Nekudaro, parizvino, danho rekutangazve kuenda nendege nenyika idzi rinoratidzika kunge riri rezvemagariro, sezvo pasina ndege yazivisa hurongwa hwekumisazve nendege dzakarongwa pakati peRussia Federation, France neCzech Republic.
Vakuru veRussia vakazivisawo danho rekuwedzera chirongwa chenguva dzose dzendege dzinoenda kuAustria, Greece, Belgium, Hungary, Bulgaria, Croatia, Ethiopia neRebhanoni kubva muna Chikunguru 24.
Parizvino, iyo Russian Federation yatangazve traffic yemhepo nematunhu makumi mana nemasere.